IINGCAMANGO ZODONGA OLUSISIGXINA (UYILO LWANGAPHAKATHI) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango zodonga olusisigxina (Uyilo lwangaphakathi)
Iingcamango zodonga olusisigxina (Uyilo lwangaphakathi)
Kweli phepha sabelana ngombono odongeni we-acent odongeni kwigumbi lokulala, kwigumbi lokuhlala nakwigumbi lokutyela.
Iindonga zeAccent, uyabathanda okanye ubathiye. Kude kube ngoku, yiyo loo nto. Ngeengcebiso ezimbalwa ezivela eziluncedo, ungaqala ukubona iindonga zesitayile njenge-asethi elungileyo kunokuba ubambe ukusuka kwi-90's. Amakhaya acela nje iindonga ze-aksenti, zenza indawo ekugxilwe kuyo, yongeza idrama, kwaye ibonelela ngendlela yokunika ubungqongqo kunye nokwahlukana kwisicwangciso esivulekileyo esivulekileyo kancinci.
Ukuba une-shelving eyakhelweyo okanye udonga oludongeni eludongeni olunye, sele unodonga oluvakalayo! Yenze ibonakale ngokuzoba okanye ngokufaka udonga ngaphakathi ngaphakathi eshelini. Khetha xa uthatha isigqibo sokuba ubeke ntoni kwiishelufa, ezi ayizizo izinto ezishelifini, ke bonisa izinto ezintle nezikhethekileyo. Vary imixholo kwishelufa nganye, unokuxhoma iifoto ezincinci kudonga lwangasemva kweshelfu yokujonga okwahlukileyo, okuphucukileyo. Ukuba awunayo i-shelf eyakhelweyo kodwa njengengcamango yokuba nodonga olusisigxina olubonakala ngathi lakhiwe kwishelufa, yakha ngee-shelf ezithengiweyo eziphantsi komhlaba kunye nesithsaba.
Yimalini iringi yomtshato kaKim kardashian
Gcina ezi shelufu eludongeni eludongeni ngeencwadi, uvumela umbala weentsiba ukubonelela ngombala owongezelelweyo kwigumbi. Okanye, ukuba unomdla wokwenene, ungazenzela iincwadi zakho, iinoveli eziluhlaza okwesibhakabhaka, nebubuxoki kwi-almond e-creamy, ii-thrillers ezibomvu ngqindilili. Hlanganisa iincwadi kunye nokuthintela umbala ongasentla onokuthi uguqulwe ngokulula xa ukhathala ngawo. Ndwendwela iphepha lethu Imibala yodonga egxininisayo ngeendlela ezininzi zokufumana isitayile esifanelekileyo osifunayo.
Igumbi lokutyela lendabuko elinoyilo oluvulekileyo ekhitshini longeza ipizazz encinci ngokufaka iincwadi zokupheka ezimibalabala kwiishelufa zencwadi zazo ezakhelwe ngaphakathi.
Ukuba uya kwidrama enzulu kunye nobugcisa kwigumbi lakho lokulala, udonga lwesandi yinto oyifunayo. Ibhedi ene-headboard esezantsi exhaswa ngofele okanye udonga olonyusiweyo lwelaphu lwenza umva omangalisayo.
Hlanganisa izipili ezinde ngaphezulu kwetafile yakho esecaleni kwebhedi kwaye uzenze zibengezele, yongeza imihlobiso yeglasi exhonywe eluphahleni ngaphezulu kwetafile nganye. Gcina iskimu sombala esine-monochromatic, ipeyinti engwevu engwevu ngombala omnyama kancinci wegrey kwilaphu lokuphakamisa. Phatha ipeyinti engwevu engwevu kuzo zonke iindonga kwigumbi lokuqhubekeka. Ukuba unegumbi elikhulu, ububanzi bodonga oluphakanyisiweyo kufuneka lubeke ibhedi kunye neetafile zebhedi. Ukuba igumbi lakho lincinci, udonga oluphakanyisiweyo lunokuthatha lonke udonga oluchasene nebhedi yakho.
Kwindlu enesicwangciso esivulekileyo esinegumbi elikhulu elisebenza njengeendawo zokudlela kunye namagumbi okuhlala, udonga olusisigxina lunokunceda ukuchaza ngcono indawo. Kwigumbi lokuhlala / lokutyela, phatha udonga lwangasemva lwendawo yokutyela njengodonga olusisigxina. Ungalupenda olu donga umbala owahlukileyo, ewe, kodwa kutheni ume apho? Amagumbi okutyela zihlala zizithuba zentlalo ezisetyenziselwa ngaphezulu kokutya. Cinga ngobusuku bemidlalo nabahlobo, ukuseta itafile njenge-buffet yamaqela ebhola ekhatywayo, okanye indawo nje yeti kunye nengxoxo nomhlobo. Unethuba lokwenza into ekhethekileyo.
Ukuba ukwimephu, fumana imephu yesiko eyenziwe ngobungakanani bodonga. Mhlawumbi yidrama enkulu kakhulu okanye indleko, ukuba nemephu enkulu eyenziwe ngokwezifiso kunye nokuxhonywa eludongeni kunefuthe lokubonakalayo. Khetha umbala ofihlakeleyo kwimaphu ukupeyinta udonga olusemva kwemephu. Ifoto oyithandayo okanye uthotho lweefoto ziya kusebenza kakuhle apha.
Eli gumbi lokutyela libonisa indalo eyahlukileyo kunye nokufota komhlaba kwisakhelo esimiselwe ukugcinwa kwamaplanga.
Ukuthetha ngobusuku bemidlalo, udonga lwebhodi efanelekileyo kwimidlalo yamagama nakwimidlalo yokuzoba. Kukwalungile kubazobi, abancinci nabadala. Igumbi lokulala, ikhitshi, okanye udonga lwegumbi lokuhlala olungenanto ininzi luqinisekileyo ngumgqatswa omkhulu wepeyinti ebhodini. Ungazibhala phantsi iishedyuli, iimenyu, abantwana bakho banokuzoba eludongeni ngaphandle kokuzonakalisa, kwaye kulula ukuba bazihombise ngokutshintsha kwamaxesha kunye neeholide. Kwaye izinto zokumakishwa kwitshokhwe ezingamanzi ziyafikeleleka kwaye ziza ngayo yonke imibala, ngenxa yoko awusoze ube nexhala malunga nothuli lwetyokhwe olwenza ubumdaka.
Ukujonga okuthe kratya, ungenza izakhelo ekubunjweni okulula kwaye ubeke isakhelo kubantwana bakho ukuba bazobe ukuze izinto zingabekwa nje ngokungacwangciswanga eludongeni. Olu nyango lwodonga olusisigxina lusebenza kakuhle kwipaseji, kwaye akukho namnye umntu olindele ukuba ipaseji ibenodonga olukhethekileyo!
Ukuba ukhetha ukwenza udonga lwe-aksenti ngephepha lodonga, unokufuna ukuqaphela ukungashiyi ezinye iindonga zimhlophe ngaphandle kokuba imvelaphi yephepha lodonga imhlophe. Ukwenza njalo kunokushiya igumbi lakho lijongeka ngathi ligqityiwe. Endaweni yokupeyinta ezinye iindonga umbala ongasemva kwiphepha lodonga. Intwana yokucinga kunye nokucinga ngaphandle kwebhokisi (yepeyinti) kuko konke okufunekayo ukudala udonga oluhle lwe-aksenti!
Iingcamango zeWall Wall kwiGumbi lokulala
Udonga olusisigxina kwigumbi lokulala yindlela enobuchule yokongeza imo yakho yesitayile sakho kuyilo lwegumbi lakho. Ngokwesiqhelo, udonga lwe-aksenti kwigumbi lokulala lupeyintwe okanye kuluhonjiswe ngodonga ngombala owahlukileyo wepeyinti. Oku kunokuba nefuthe lokwenza igumbi libukeke likhulu, kwaye kongeza ubuchule kwisithuba.
Eli gumbi lokulala labaselula libonelela ngodonga olungwevu olungwevu emva kwebhedi ngokuchaseneyo ngokuchasene nomva omhlophe.
Uyilo olumangalisayo lwabantwana kwigumbi lokulala lakwaMinecraft lubonisa udonga olusisigxina olupheleleyo kunye neebhloko zokungcola ezivela kumdlalo othandwayo. Amafu apeyintiweyo eluphahleni anceda ukuphucula ubume ngokubanzi kunye nokukhuthaza imvakalelo yokuba kumdlalo. Ininzi yokuhonjiswa okunxulumene neMinecraft kunceda ukuseta imo kunye nokwenza umxholo ohlekisayo.
Iindonga ezigxininisa ngomthi lukhetho olukhethiweyo ekhaya kwaye okwangoku ziyathandwa kwaye zifunwa njengendlela yokwenza umlinganiswa kuyilo lwegumbi. Olu donga luxinzelelweyo lweplanga egxumeka udonga ngasemva kweebhedi inika ukubukeka kwe-rustic, kodwa kube kuhle.
Ipensile yodonga inokuba yindlela entle yokuphucula igumbi lokulala labantwana. Eli gumbi alikhangeli nje ukuba libukeke ludonga olumnyama olupinki, ukuhonjiswa, izinto zokulala kunye namakhethini abopha imibala kunye ukuze yenze uyilo oluhambelanayo.
Eli gumbi lokulala libonisa iphepha lodonga oluhlaza emva kwebhedi. Kuba umbala oluhlaza uhlala uvusa iimvakalelo zokuba kwindalo kwaye ngoxolo yenza umbala omkhulu kwigumbi lokuphumla lokulala.
Into elula njengokukhanya okuxhonywe eludongeni ngaphezu kwebhedi yakho kunokuba yindlela enomdla yokwenza umdlalo weqonga kunye nomtsalane obonakalayo. Ukuxhoma izibane zegumbi lokulala kunokudala imeko yothando kwaye kuncede ukuseta imeko.
Ukukhanya okungwevu kolu donga lwegumbi lokulala kuncoma ubumnyama obomileyo obenziwe ngeplanga ezindongeni kunye nolungelelwaniso nesihlalo esingwevu nokuphosa ingubo.
Indibaniselwano yegumbi lokulala elinomdla omnyama nomhlophe ibonelela ngodonga olumhlophe kunye ne-pluses encinci ecaleni kwe udonga lwe-aksenti emnyama . Umahluko kwiindonga ezimnyama nezimhlophe, iimpahla kunye nokuhonjiswa kudibanisa umahluko omkhulu kunye neepateni kuyilo.
Igumbi labantwana lokuzonwabisa libonisa ibhodi enebhodi ebhodini enika ithuba elininzi lokuba abantwana baphonononge amacala abo okuyila. Iziqwenga zemibala eqaqambileyo zinceda ukukhulisa igumbi kunye nokususa udonga olumnyama.
Uyilo lweglam lokulala lubonisa ukubamnyama okumnyama okusethwe ngokuchasene nopende wombala wodonga. Ibhedi enebhodi enkulu yentloko enephedi kunye ne-ottoman ekhangekileyo ebonakala ngathi inesitayile ebekwe ngasemva komnyama.
Izibane zinokwandisa imeko yegumbi lokulala kunye nokwenza umdla obonakalayo kwisithuba. Le alcove iseludongeni igqityiwe yaxhotyiswa ngezibane ze-neon ukuyinika ukukhanya kwe-moody kule studio studio.
Iingcamango zodonga olukhawulezayo kwigumbi lokuhlala
Udonga olusisigxina luyasebenza kwigumbi lokuhlala ngokwaphula indawo enkulu, ukubonisa iinkcukacha zokwakha, ukongeza umbala wepop, okanye ukukhuthaza isitayile sakho.
Uyilo lweli gumbi lokuhlala lwanamhla oluvela kwitreyini engwevu yethayile yendawo yomlilo ukomeleza uyilo lwayo.
Udonga olunomtsalane lwamatye egumbi lokuhlala elisesikweni likhanyiselwe zizibane zangasemva ukongeza idrama eyongezelelweyo kunye nokubonisa uyilo.
Ezi paneli zeteksi zendalo zenziwe yiWallsupply ukusuka kumthi obuyisiweyo kwaye zisebenza kakuhle kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokutyela okanye ekhitshini.
Uyilo lwegumbi lokuhlala lwangoku ludonga olugqityiweyo olusebenzisa ii-shades ezimbini ezingwevu ezidityaniswe ngatyheli kunye nomhlophe kwimida yokwenza umdla ongasemva.
Igumbi lokuhlala elicocekileyo lisebenzisa udonga olusisigxina lomthi olujikeleze indawo yomlilo ukuze unike i-rustic design twist. Ezinye izinto ezisegumbini zigcinwa zilula ukugcina uyilo luziva lumnyama kakhulu.
Iingcamango zeWall Wall kwiGumbi lokuTyela
Imibala eyahlukileyo neyolungelelwanisiweyo ihlala isetyenziswa kwigumbi lokutyela ukuphucula inkangeleko. Ezinye izimvo zale ndawo zibandakanya ukongeza udonga losapho, iifoto ezinxulumene nolonwabo kunye nokuhamba, isibuko esikhulu sodonga, igadi ethe nkqo, uphawu lweediliya, izityalo zangaphakathi, udonga lwe-aksenti yomthi, ishelfu esikhanyayo okanye izinto zakho ozithandayo.
Eli gumbi lokutyela lanamhlanje lisebenzisa udonga lwamatye oluqingqiweyo ukuzisa iliso ngaphakathi kunye nokwenza umva obutofotofo kusapho nakwizihlobo. Uyilo luyasetyenziswa kwakhona kwigumbi lokuhlala elinombono ovulekileyo.
Eli gumbi lokutyela linodonga olusisigxina lweplanga oluzisa iintlobo ngeentlobo zemibala emdaka ukutshatisa umgangatho omnyama womthi okhuni kunye nezinto zomthi kwitafile yokutyela.
Le khitshi enendawo yokutyela yendawo yokutya kwasekuseni ibonisa igadi yayo emileyo ethe nkqo eludongeni oluchasayo ukongeza umahluko kuyo yonke uyilo olumhlophe lwendawo.
Lo mthombo mkhulu wodonga lwangaphakathi ubonelela ngokuthula kwaye unceda ukwahlula igumbi lokutyela kwezinye iindawo zekhaya.
Indawo eyakhelwe-ngaphakathi eshelufini ngaphakathi kwigumbi lokutyela inokuguqulwa ibe ludonga lwe-aksenti ngokufaka izibane ezigqityiweyo ukuzisa ingqalelo kuloo ndawo. Izinto ezigcinwe apha kufuneka zenziwe ngononophelo ukunqanda ukujonga kuxinene.
(1) Iindonga ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
buhlanjwa njani ubucwebe bedayimane
Iqela le-bachelorette kwi-las vegas
ukuba ubhale ntoni kwikhadi lesikhumbuzo
iqhina elimhlophe vs iqhina elimnyama
ilokhwe yomtshato h & m